KARACHI (Nhau makumi mapfumbamwe neshanu) - South Africa Cricket Board yabvuma kushanyira Pakistan asi kuziviswa kwehurongwa kuchaitwa mushure mechikumbiro chakanyorwa.
Zvinokosha kuziva kuti 92 Nhau dzakatoburitsa nhau maererano nekushanya kweProteas munaNovember27.
Achitaura nemusangano wevatori venhau muKarachi, CEO wePakistan Cricket Board (PCB) Wasim Khan akajekesa mukana wakasimba wekushanyirwa nechikwata cheSouth Africa mukupera kwaKurume kwemakumi matatu eT20I.
"Ini ndichave musangano wanhasi wekutora nhau dzakanaka," akadaro Wasim. "MCC iri kutumira timu yayo kuPakistan munaFebruary 2020, timu ichatungamirwa nevaimbove Sick Lankan Cricketer Kumar Sangakkara uye ichatamba mitambo muLahore," Mukuru wePBB akasimbisa.
Uku kuchave kwekutanga kushanya kweMCC kuPakistan mumakore anopfuura makumi mana. Nguva yekupedzisira iyo Marylebone Cricket Club yakasangana Pakistan yaive muna 1973.
Chirevo kubva kuMCC chakataura kuti pfungwa yekushanya kuenda kuPakistan yanga iri danho rakarehwa nedare reWorld Cricket, nenhengo dzakaratidza kufarira kubatsira Pakistan panguva yekutapwa kwenyika kubva mukutambira kiriketi yepasi rose.
"Pamusangano weMCC World Cricket komisheni yakaitirwa kuWis's muna Nyamavhuvhu, WCC yakasimbisawo rutsigiro rwavo mukuona mativi ari kushanya adzokera kuPakistan - nekuongororwa kwezvekuchengetedzeka kunge chiri chekutanga - zvichitevera mharidzo nekukurukurirana naWasim Khan," chirevo chakadaro.
Akasimbisawo kuti Cricket South Africa yakatobvumirawo kutumira timu yayo kunoshanya kwenguva pfupi kuPakistan muna Kurume gore rinouya. Nekudaro, pane zvinhu zvishoma zvichiri kuda kupedziswa mune izvo.
"Isu tave kutaura neSouth Africa nezvekutamba maT20 matatu muPakistan mukupera kwaKurume. Bhodhi ravo rakasainira kure isu tiri kungomirira vatambi vacho kuti vaone kana vachifara. Ivo vane dzimwe shanduko muhutungamiriri hwavo. CEO wavo ashanduka, vanozova CEO mutsva munguva pfupi uye tichava nenyaya dzakanaka mumavhiki mashoma anotevera, "akadaro Wasim Kan.
Akataura kuti PCB iri mukukurukurirana neBangladesh Cricket Board nezvekushanya kwemwedzi unouya uye akasimbisa kuti pane zvimwe zvinodzikiswa neBangladesh.
"Ivo havana kana nyaya yekutamba T20Is asi vari kuratidza kusada kutamba Mutambo Cricket." Ndakavabvunza kuti nei vaine matambudziko nekutamba cricket muPakistan, ”akadaro Wasim.
"Ndinovimba tichava" A "timu kubva kuAustralia yaishanyira Pakistan zvisati zvaitika. Tiri zvakare muhurukuro pamwe nemamwe mabhodhi ekushanya kwechikwata chedu, "Wasim akadaro apo achizivisa kuti Pakistan Chikwata chave kuzozivikanwa se" Pakistan Shaheens ".